Par Taratra sur 17/06/2020
Araka ny tarehimarika nomen’ny EDBM, ny volana avrily, vitsy indrindra ny orinasa nitsangana tamin’ity taona ity, tsy nisy afa-tsy 15. Tao anatin’ny dimy volana voalohany, nisy 438, raha 607 izany nandritra ny vanim-potoana mitovy ny tamin’ny taon-dasa. Nihena 27 % raha ampitahana ny tamin’ny taon-dasa. Nisy ny fanadihadiana nataon’ny EDBM teny anivon’ny orinasa 236 noho izao fiantraikan’ny Coronavirus izao. 36 % ireo nanambara fa voatery mikatona anatin’ny fotoana voafetra. Orinasa tena madinika sy madinika ny maro anisa amin’izany. 10 600 ireo olona tratran’ny asa mihantona ka 60 % ny any amin’ny faritra afaka haba, fihariana zaitra.
Misokatra ny tsenan’omby ao amin’ny kaominina Fihaonana, distrikan’i Tsiroanomandidy, faritra Bongolava. Nitady lalana ho amin’izany ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina ho fidiram-bola ahazoana manao asa fampandrosoana betsaka. Tsenan’omby isaky ny talata sy alakamisy voafaritry ny lalàna, ho loharanom-bola amin’ny alalan’ny « guichet unique ». Antoka iray ho an’ny fandriampahalemana: arindra ny fiambenana, amboarina ny lalana ahafahan’ny fiara vaventy mitondra omby. Nanomezana toky ny mpandraharahara ireo rehetra ireo.
Indroa misesy izao ny nanemorana fandoavana hetra tambatra any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy i Vatovavy Fitovinany amin’ity taona ity. Ny 15 jona 2020 ny fe-potoana farany nandoavana izany, nanentanana ny rehetra any amin’ireo faritra roa ireo. Manomboka izao izany, milatsaka ny sazy ho an’izay tsy nahefa ny azy. Nialoha izany, nomarihin’ny sampandraharahan’ny hetra iraisan’ireo faritra ireo fa efa nahatratra 68 % ny nandoa ny adidiny amin’io hetra tambatra io. Isan-taona, ny faran’ny volana marsa ny farafandoavana hetra tambatra fa noho ny toe-javatra iaraha-mahalala vokatry ny Covid-19 ny nanemorana azy.